ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ပယ်နယ်တီကို နှစ်ယောက်ကန်တာက ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ရပ်ပါ
ပယ်နယ်တီကို ထူးထူးခြားခြား ကစားသမားနှစ်ယောက် ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်များ
27 Nov 2018 . 7:39 PM
ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ပယ်နယ်တီကန်တယ်ဆိုတာ မထူးခြားပေမယ့် အဲဒီပယ်နယ်တီကို ကစားသမား(၂)ယောက်က ကန်တာဆိုရင်တော့ သာမန်မဟုတ်တော့ဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ပယ်နယ်တီမှာ ဂိုးသမားနဲ့ ကန်မယ့်သူ One By One ကန်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပယ်နယ်တီကန်မယ့်သူက မကန်ဘဲ တခြားကစားသမားတစ်ယောက်ကို တို့ပေးပြီး ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့ တော်တော်လေးရှားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပယ်နယ်တီကို ထူးထူးခြားခြား ကစားသမားနှစ်ယောက် ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို AkhayarSports ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
Rik Coppens/Andre Piters – Belgium
ပယ်နယ်တီကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကစားသမားနှစ်ယောက် ကန်သွင်းခဲ့တာလို့ သတ်မှတ်ရမှာက ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ အိုက်စလန်တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၇၊ ဇွန်လ (၅)ရက်တုန်းက ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအဖြစ် ဘယ်လ်ဂျီယံ-အိုက်စလန်တို့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပထမပိုင်းမပြီးခင်မှာပဲ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းက (၆-၁)ဂိုးနဲ့ ဦးဆောင်နေတယ်။ ပထမပိုင်းပြီးဖို့ မိနစ်ပိုင်းအလိုမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း ပယ်နယ်တီကန်သွင်းခွင့် ရခဲ့ပြီး အဲဒီပယ်နယ်တီကို ကော့ပ်ပန်စ် Rik Coppens က ကန်သွင်းဖို့ နေရာယူပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ပယ်နယ်တီဧရိယာထဲ ပြေးဝင်လာတဲ့ အသင်းဖော် ပီတာ့စ် Andre Piters ဆီ အသာလေး ဘောလုံးကို ပုတ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ပီတာ့စ်ကလည်း ကော့ပ်ပန်စ်ဆီ ပြန်ပုတ်ပေးခဲ့ချိန်မှာ ကော့ပ်ပန်စ်က ဂိုးသမားမရှိတဲ့ ဂိုးပေါက်ထဲကို အသာကန်သွင်းပြီး ဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းက (၈-၃)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ နေရာယူသွားတာက ကော့ပ်ပန်စ်နဲ့ ပီတာ့စ်တို့ရဲ့ ပယ်နယ်တီကန်သွင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပါပဲ။
ကော့ပ်ပန်စ်နဲ့ ပီတာ့စ်တို့ရဲ့ ပယ်နယ်တီကန်သွင်းမှုကို ကြည့်ရန်လင့်ခ်
Johnny Newman/Wilf Carter – Plymouth Argyle
အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာ ‘Two-Man’ ပယ်နယ်တီကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူက ပလိုင်းမောက်အသင်း ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဂျွန်နီနယူးမန်း Johnny Newman နဲ့ ၀စ်ဖ်ကာတာ Wilf Carter တို့ပါ။ ၁၉၆၁၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆)ရက်၊ အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပယ်နယ်တီကန်ခွင့်ရခဲ့တာကို ကာတာက အသင်းဖော် နယူးမန်း ကန်သွင်းနိုင်အောင် ဘောလုံးကို တို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (၃)နှစ်အကြာမှာ နယူးမန်းဟာ အဲဒီအတိုင်း လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူက ဂိုးမသွင်းဘဲ အသင်းဖော် ထရီဘယ်လ်ကော့ခ် Mike Trebilcock ဂိုးသွင်းနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နယူးမန်းနဲ့ကာတာတို့ရဲ့ ပယ်နယ်တီကို ကြည့်ရန်လင့်ခ်
Johan Cruyff /Jesper Olsen – Ajax
အေဂျက်စ်နဲ့ နယ်သာလန် ဂန္ထ၀င်ကစားသမားကြီး ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff ဟာလည်း ‘Two-Man’ ပယ်နယ်တီနဲ့ သိပ်မစိမ်းပါဘူး။ ၁၉၈၂၊ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက Helmond Sport အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အေဂျက်စ်အသင်း ပယ်နယ်တီကန်ခွင့်ရပါတယ်။ ဒီပယ်နယ်တီကို တောင်ပံကစားသမား အော်လ်ဆန် Jesper Olsen က ကန်ဖို့ ဘောလုံးတည်ပြီးမှ ယိုဟန်ခရိုက်ဆီ ထိုးပေး၊ အဲဒီဘောလုံးကို ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်က ဂိုးသမားမရှိတဲ့ ဂိုးပေါက်ထဲကန်သွင်းခဲ့တာပါပဲ။
ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်နဲ့ အော်လ်ဆန်တို့ရဲ့ ပယ်နယ်တီကန်သွင်းမှုကို ကြည့်ရန်လင့်ခ်
Thierry Henry/Robert Pires – Arsenal
၀ါရင့် အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကတော့ အွန်နီ Thierry Henry နဲ့ ပီရက်စ် Robert Pires တို့ရဲ့ ‘Two-Man’ ပယ်နယ်တီကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီပယ်နယ်တီက အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၅၊ အောက်တိုဘာလ (၂၂)ရက်က မန်စီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အာဆင်နယ်အသင်း ပယ်နယ်တီကန်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ပီရက်စ်ဟာ ဂိုးသမားကို လှည့်စားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အွန်နရီနဲ့ နားလည်မှု လွဲခဲ့လို့ ဒိုင်လူကြီးက ပြစ်ဒဏ်ဘောအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ဂိုးရမယ့်အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
အွန်နရီနဲ့ ပီရက်စ်တို့ရဲ့ ပယ်နယ်တီကန်သွင်းမှုကို ကြည့်ရန်လင့်ခ်
Messi/ Luis Suarez – Barcelona
မော်ဒန်ခေတ် ဘောလုံးလောကမှာ အထင်ရှားဆုံးက မက်ဆီ Messi နဲ့ ဆွာရက်ဇ် Luis Suarez တို့ရဲ့ ပယ်နယ်တီပါပဲ။ ၂၀၁၆၊ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက ဆယ်လ်တာဗီဂိုနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ပယ်နယ်တီကို မက်ဆီက ကန်မလိုဟန်ပြပြီးမှ ဆွာရက်ဇ်ဆီ ထိုးပေးခဲ့ပြီး ဆွာရက်ဇ်က အမှားအယွင်းမရှိကန်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီနဲ့ ဆွာရက်ဇ်တို့ရဲ့ ပယ်နယ်တီကန်သွင်းမှုကို ကြည့်ရန်လင့်ခ်
ဘောလုံးစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာ ပယ်နယ်တီကန်မယ်ဆိုရင် ဧရိယာအတွင်း ကန်မယ့်ကစားသမားနဲ့ ဂိုးသမားက လွဲပြီး ဘယ်သူမှ မရှိစေရလို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ဒီလို နှစ်ဆင့်ကန်တာကို မတားမြစ်ထားပါဘူး။ လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကျရင်လည်း ‘Two-Man’ ပယ်နယ်တီကို ဘယ်ကစားသမားတွေ ကန်သွင်းကြဦးမလဲဆိုတာကတော့ . . . .
ပယျနယျတီကို ထူးထူးခွားခွား ကစားသမားနှဈယောကျ ကနျသှငျးခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျမြား
ဘောလုံးပှဲတှမှော ပယျနယျတီကနျတယျဆိုတာ မထူးခွားပမေယျ့ အဲဒီပယျနယျတီကို ကစားသမား(၂)ယောကျက ကနျတာဆိုရငျတော့ သာမနျမဟုတျတော့ဘူး။ ပုံမှနျအတိုငျးဆိုရငျ ပယျနယျတီမှာ ဂိုးသမားနဲ့ ကနျမယျ့သူ One By One ကနျတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ပယျနယျတီကနျမယျ့သူက မကနျဘဲ တခွားကစားသမားတဈယောကျကို တို့ပေးပွီး ကနျသှငျးခဲ့တဲ့ဖွဈရပျကတော့ တျောတျောလေးရှားပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ပယျနယျတီကို ထူးထူးခွားခွား ကစားသမားနှဈယောကျ ကနျသှငျးခဲ့တဲ့ဖွဈရပျတှကေို AkhayarSports ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
ပယျနယျတီကို ပထမဆုံးအကွိမျ ကစားသမားနှဈယောကျ ကနျသှငျးခဲ့တာလို့ သတျမှတျရမှာက ဘယျလျဂြီယံနဲ့ အိုကျစလနျတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ၁၉၅၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲပဲဖွဈပါတယျ။ ၁၉၅၇၊ ဇှနျလ (၅)ရကျတုနျးက ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲအဖွဈ ဘယျလျဂြီယံ-အိုကျစလနျတို့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပထမပိုငျးမပွီးခငျမှာပဲ ဘယျလျဂြီယံအသငျးက (၆-၁)ဂိုးနဲ့ ဦးဆောငျနတေယျ။ ပထမပိုငျးပွီးဖို့ မိနဈပိုငျးအလိုမှာ ဘယျလျဂြီယံအသငျး ပယျနယျတီကနျသှငျးခှငျ့ ရခဲ့ပွီး အဲဒီပယျနယျတီကို ကော့ပျပနျဈ Rik Coppens က ကနျသှငျးဖို့ နရောယူပွီးပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ ပယျနယျတီဧရိယာထဲ ပွေးဝငျလာတဲ့ အသငျးဖျော ပီတာ့ဈ Andre Piters ဆီ အသာလေး ဘောလုံးကို ပုတျပေးခဲ့ပမေယျ့ ပီတာ့ဈကလညျး ကော့ပျပနျဈဆီ ပွနျပုတျပေးခဲ့ခြိနျမှာ ကော့ပျပနျဈက ဂိုးသမားမရှိတဲ့ ဂိုးပေါကျထဲကို အသာကနျသှငျးပွီး ဂိုးသှငျးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီပှဲမှာ ဘယျလျဂြီယံအသငျးက (၈-၃)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ သတငျးစာခေါငျးကွီးပိုငျးမှာ နရောယူသှားတာက ကော့ပျပနျဈနဲ့ ပီတာ့ဈတို့ရဲ့ ပယျနယျတီကနျသှငျးတဲ့အဖွဈအပကျြပါပဲ။
ကော့ပျပနျဈနဲ့ ပီတာ့ဈတို့ရဲ့ ပယျနယျတီကနျသှငျးမှုကို ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
အင်ျဂလိပျဘောလုံးလောကမှာ ‘Two-Man’ ပယျနယျတီကို စတငျမိတျဆကျပေးခဲ့သူက ပလိုငျးမောကျအသငျး ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဂြှနျနီနယူးမနျး Johnny Newman နဲ့ ဝဈဖျကာတာ Wilf Carter တို့ပါ။ ၁၉၆၁၊ ဖဖေျောဝါရီလ (၆)ရကျ၊ အကျစတှနျဗီလာနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပယျနယျတီကနျခှငျ့ရခဲ့တာကို ကာတာက အသငျးဖျော နယူးမနျး ကနျသှငျးနိုငျအောငျ ဘောလုံးကို တို့ပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ (၃)နှဈအကွာမှာ နယူးမနျးဟာ အဲဒီအတိုငျး လုပျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီတဈခါတော့ သူက ဂိုးမသှငျးဘဲ အသငျးဖျော ထရီဘယျလျကော့ချ Mike Trebilcock ဂိုးသှငျးနိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နယူးမနျးနဲ့ကာတာတို့ရဲ့ ပယျနယျတီကို ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
အဂေကျြဈနဲ့ နယျသာလနျ ဂန်ထဝငျကစားသမားကွီး ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff ဟာလညျး ‘Two-Man’ ပယျနယျတီနဲ့ သိပျမစိမျးပါဘူး။ ၁၉၈၂၊ ဒီဇငျဘာလတုနျးက Helmond Sport အသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ အဂေကျြဈအသငျး ပယျနယျတီကနျခှငျ့ရပါတယျ။ ဒီပယျနယျတီကို တောငျပံကစားသမား အျောလျဆနျ Jesper Olsen က ကနျဖို့ ဘောလုံးတညျပွီးမှ ယိုဟနျခရိုကျဆီ ထိုးပေး၊ အဲဒီဘောလုံးကို ယိုဟနျခရိုကျဖျက ဂိုးသမားမရှိတဲ့ ဂိုးပေါကျထဲကနျသှငျးခဲ့တာပါပဲ။
ယိုဟနျခရိုကျဖျနဲ့ အျောလျဆနျတို့ရဲ့ ပယျနယျတီကနျသှငျးမှုကို ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
ဝါရငျ့ အာဆငျနယျပရိသတျတှကေတော့ အှနျနီ Thierry Henry နဲ့ ပီရကျဈ Robert Pires တို့ရဲ့ ‘Two-Man’ ပယျနယျတီကို မှတျမိကွဦးမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီပယျနယျတီက အောငျမွငျမှုမရခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၅၊ အောကျတိုဘာလ (၂၂)ရကျက မနျစီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ အာဆငျနယျအသငျး ပယျနယျတီကနျခှငျ့ရခဲ့ပွီး ပီရကျဈဟာ ဂိုးသမားကို လှညျ့စားဖို့လုပျခဲ့ပမေယျ့ အှနျနရီနဲ့ နားလညျမှု လှဲခဲ့လို့ ဒိုငျလူကွီးက ပွဈဒဏျဘောအဖွဈသာ သတျမှတျပေးခဲ့တာကွောငျ့ ဂိုးရမယျ့အခှငျ့အရေးကို လကျလှတျခဲ့ရပါတော့တယျ။
အှနျနရီနဲ့ ပီရကျဈတို့ရဲ့ ပယျနယျတီကနျသှငျးမှုကို ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
မျောဒနျခတျေ ဘောလုံးလောကမှာ အထငျရှားဆုံးက မကျဆီ Messi နဲ့ ဆှာရကျဇျ Luis Suarez တို့ရဲ့ ပယျနယျတီပါပဲ။ ၂၀၁၆၊ ဖဖေျောဝါရီလတုနျးက ဆယျလျတာဗီဂိုနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ပယျနယျတီကို မကျဆီက ကနျမလိုဟနျပွပွီးမှ ဆှာရကျဇျဆီ ထိုးပေးခဲ့ပွီး ဆှာရကျဇျက အမှားအယှငျးမရှိကနျသှငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မကျဆီနဲ့ ဆှာရကျဇျတို့ရဲ့ ပယျနယျတီကနျသှငျးမှုကို ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
ဘောလုံးစညျးမဉျြးတှထေဲမှာ ပယျနယျတီကနျမယျဆိုရငျ ဧရိယာအတှငျး ကနျမယျ့ကစားသမားနဲ့ ဂိုးသမားက လှဲပွီး ဘယျသူမှ မရှိစရေလို့ သတျမှတျထားပမေယျ့ ဒီလို နှဈဆငျ့ကနျတာကို မတားမွဈထားပါဘူး။ လာမယျ့ပှဲစဉျတှကေရြငျလညျး ‘Two-Man’ ပယျနယျတီကို ဘယျကစားသမားတှေ ကနျသှငျးကွဦးမလဲဆိုတာကတော့ . . . .